Gods (ဘုရားသခင်များ) - YOYARLAY Digital Media and News
ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ဘာသာရေး တစ်ခုခုရဲ့ အထိန်းအကွပ် နဲ့ နေထိုင်ကြရတာများပါတယ်။ မိရိုးဖလာဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်သက်ဝင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာတစ်ခုခု အောက်မှာ ရှိနေကြတာပါပဲ။
လက်ရှိကာလမှာတော့ ဘယ်ဘာသာမှ မကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမဲ့တွေလည်း ရှိလာနေပြီး ဒါကလည်း ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စရပ် တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာသာရေးဆိုတာဘာလဲ? ဘုရားသခင်တွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ? ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘုရားတွေကို ယုံကြည် သက်ဝင်ကြပြီး ဘာသာရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်နေကြသလဲ?
ဘုရားတွေဟာ သာမာန်လူတွေထက် အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ ညဏ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီး လူ့ဘဝဆိုတာဘာလဲ?၊လူပီသအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ? မသေခင်ဘာလုပ်ကြမလဲ? အစရှိတဲ့ အဖြေတွေကို ပေးနိုင်သူတွေပါ။ ဘုရားတွေ အားလုံးရဲ့ အလိုက မသေခင် အကျိုးရှိရှိ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ အတွက် ဘဝနေနည်း လမ်းစဉ်တွေကို ပြောဆို ဆုံးမပေးလိုခြင်းပါပဲ။
ဘုရားတွေ မပေါ်ခင် ခေတ်က လူတွေဟာ ဘာကို ကိုးကွယ်ကြသလဲ? သူတို့ကြောက်တဲ့ အရာကို ကိုးကွယ်ပါတယ်။ မိုးကြိုးပစ်လိုက်လို့ အပင်ကြီး တစ်ပင် တွေ့ရင် မိုးကောင်းကင်နတ်မင်းကြီး (သူတို့အခေါ် ဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်) ကို ကိုးကွယ်မယ်။ ပင်လယ်ထဲသွားလို့ လှိုင်းလေတွေ တိုက်ရင် ပင်လယ်နတ်မင်းကြီးကို ကိုးကွယ်မယ်ပေါ့။ လူဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုးကွယ်ရာ ရှာတယ်ဆိုတာ အကြောက်တရား ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားအသီးသီးက ဘုရားတွေအကြောင်း လေ့လာဖတ်ရှုထားမိတာလေးတွေကို ပြန်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း မပြောခင်တော့ အရင်ဆုံးရှင်းရမှာက အေဘရာဟမ်းမစ် ရီလေဂျီယမ် Abrahamic Religion ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာဟွီ (Yahweh) ဘုရားရှင်က တမန်တော် အေဘရာဟမ် Abraham ကို မိမိကိုယ်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ပြုစုစေခဲ့တဲ့ ကျမ်းမို့လို့ ဒီနာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ BC နဲ့ AD အကြောင်း ပြောဖို့ လိုလာပါပြီ။BC ဆိုတာ Before Christ (ခရစ်တော် မပေါ်မီ) ဖြစ်ပြီးAD ကတော့ Anno Domini ဖြစ်ပါတယ်။ Latin စာ အရှည်အားဖြင့် ”Anno Domini Nostri Jesu Christi” ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပာယ် အားဖြင့် ”In the year of our Jesus Christ” “ကျွန်ုပ်တို့ ဂျီးဆပ်စ် ရဲ့ နှစ်ကာလများ” ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ပြောရရင် AD 2018 ဆိုတာ ခရစ်နှစ် 2018 ဖြစ်ပြီး BC 300 ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 2318 နှစ်ကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး BC 700 ဝန်းကျင်မှာ Judaism(ဂျူးဘာသာ)၊ AD နှစ် အစပိုင်းမှာ Christianity (ခရစ်ယာန်ဘာသာ)၊AD 700 ခန့်မှာ Islam (အစ္စလာမ်) အစရှိသဖြင့် မူရင်း ဘာသာကနေ မွေးစားခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူသာ အနည်းငယ်ကွဲသွားမယ်၊ ဒီကျမ်းကပဲ လာတာမ်ို့ အနည်းငယ် ဆင်တူသယောင်ဖြစ်နေမှာပါ။
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်မှု အများဆုံး Christianity (ခရစ်ယာန်ဘာသာ) ရဲ့ ဘုရားဖြစ်တဲ့ Eternal Being ( ထာဝရ ဖြစ်တည်မှု) ရဲ့ အကြောင်း ပါ။ အရာရာတိုင်းရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် အဖြစ် လက်ခံ ယုံကြည်ကြတဲ့ သူ့အကြောင်းကို ဂျီးဆပ်စ် ခရိုက်စ် (Jesus Christ) (4 BC- 30 AD or 33 AD) (သေဆုံးသောနှစ် AD 30 နှင့် AD 33 မရေရာပါ) ဟောကြားပြောဆိုရင်း လူသိများထင်ရှား လက်ခံလာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Jesus အကြောင်းဆက်ရရင် Roman Empire (ရောမအင်ပါယာ)ထဲက ဂျူဒီယာ (Judea) ဒေသ ဘက်သ်လက်ဟန်မ်( Bethlehem) မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဂျူး(Jew) လူမျိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟီရော့ (Herod) ဘုရင်ရဲ့ ”ဂျူးတွေရဲ့ အနာဂါတ် ဘုရင် မွေးဖွားလာမယ်” ဆိုတဲ့ အမြင်ကြောင့် ဂျူးလူမျိုး ကလေးများစွာကို သတ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့် မိဘတွေဟာ အီဂျစ် (Egypt) ကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်။
ငယ်စဉ်မှာတော့ သူ့အဖေခြေရာနင်းပြီး လက်သမား တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ အိန္ဒိယ (India)၊ ပါရှား (Persia) တို့ကို လှည့်လည်ပြီး အဘိဓမ္မာ တရားတွေကို လေ့လာခဲ့တယ်။( အဲ့ဒီ အချိန်မှာ India မှာ ဂေါတမ ဘုရားပွင့်ပြီးတာ နှစ်ပေါင်း (600) ကျော်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်) အနှစ်ချုပ်ကျမ်းစာ3ခုရဲ့ အဆိုအရေတော့ ဂျော်ဒမ်(Jordan) မြစ်မှာ နှစ်ခြင်းခံခြင်း (Baptism) ပြုပြီးနောက် သဲကန္တာရ ထဲမှာ ရက် 40 နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ လူတွေကို ဘုရားသခင် အကြောင်း ဟောပြောရင်းနဲ့ ဆေးကုသသူ အဖြစ်ပါ လူတွေသိရှိခဲ့တာပါ။ ကျမ်းစာတွေ အရတော့ နာဖျားမှုမှ စတင်ပြီး သေဆုံးပြီးလူကိုတောင် ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ သာဝက 13 ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ သု့ကို သစ္စာ ဖောက်လိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ ဂျုးဒပ်စ် (Judas) ဆိုတဲ့ သာဝကဟာ ဘုရားကျောင်း စည်းမျဉ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်ပြီး Jesus ကို အနမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ငွေပြား 30 ဒဏ်ရိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူဟာ နောင်တရပြီး သစ်ပင်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တွဲလောင်းဆွဲခဲ့တယ်။ အာဏာပိုင်တွေက သူ့ကို Jesus ဟာ Son of God ဟုတ်သလားလို့ မေးတဲ့ အခါ “It is as u say” မင်းပြောသလိုပါပဲလို့ တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီနောက် အာဏာပိုင်တွေက Jesus ကို ဘုရားသခင်ကို ထိပါး ပုတ်ခတ် အကြည်ညို ပျက်စေမှုနဲ့ စွဲချက်တင်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ ပွန်းတီးရပ်စ် ပိုက်လိတ်ထ် (Pontius Pilate) ဆိုတာ တရားစီရင်ရေး အာဏာပိုင်ကပေါ့။ သူ့ရဲ့ မိန်းမက Jesus မှာ အပြစ်မရှိပါဘူးလို့ Pilate ကို ပြောပြီး Jesus ကို လွှတ်ဖို့ နားချခဲ့တယ်။ Pilate ကတော့ ဂျူး အာဏာပိုင်တွေ ကျေနပ်အောင် ကြိမ်ဒဏ်ပေးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက အပြီးကွပ်မျက်ချင်နေတာပါ။ ရိုမန် အာဏာပိုင်တွေအတွက် အဲဒီ အချိန်ဟာ Feast of passover (အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်မှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဂျူးလူမျိုးတို့ကျင်းပသောဘာသာရေးပွဲတော်) ကျင်းပချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အပြစ်သားတစ်ဦးကို လွှတ်ပေးရတဲ့ ထုံးစံရှိပါတယ်။
လူတွေဟာ Jesus ကို ကျော်လွန်ပြီး ဘာရက်ဘ်ဘက်စ် Barabbas ခေါ်တဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ ဓားပြ ကို အသက်ရှင်ပေးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Jesus ကို ကယ်လ်ဗရီ Calvary တောင်ကုန်းပေါ်ကို ကွပ်မျက်ဖို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။လမ်းမှာ စစ်သားတွေနဲ့ လူတချို့ရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကို ခံရပါသေးတယ်။ Jesus ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သံနဲ့ ရိုက်နှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘေးမှာ သူခိုး ၂ ယောက်ကိုလည်းပဲ ထို့အတူ သံနဲ့ရိုက်နှက်ထားပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာ Jesus ရဲ့ အင်္ကျီ တွေ စုတ်ပြဲကုန်သည်အထိ ရိုက်နှက်ကျတဲ့ အခါ Jesus က “Father,forgive them,for they don’t know what they are doing” “ဖခင် သူတို့ဟာ သူ့တို့ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို မသိကြတာမို့လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ” လို့ တိုင်တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ Jesus သေသွားတယ်ပေါ့။ ကွပ်မျက်ပြီးတဲ့ နောက် စနေနေ့မှာ Jesus ရဲ့ မိခင် မေရီ Mary ဟာ သူ့သားရဲ့ Tomb (ခုခေါတ်အခေါ် အခေါင်း) ကို လာကြည့်တဲ့ အခါ Jesus ကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ သူရဲ့သာဝက တွေကတော့ Jesus ဟာ သေခြင်းက ရှင်သန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်လို့ သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ သောမက်စ် Thomas ဆိုတဲ့ သာဝကကတော့ အရှင်လတ်လတ် မတွေ့သရွေ့တော့ သူ သံသယ ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ် Islam ဘာသာတရားရဲ့ ဘုရား အလ္လာဟ် (Allah) ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ God in Islam ( အစ္စလာမ် ဘာသာရဲ့ ဘုရား) ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်မှာ လိုပဲ Allah ဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ သူနဲ့ လူသားတွေကြား တမန်တော် မိုဟာမက် Muhammad ရှိနေပါတယ်။ Muhammad (AD 570-632) ဟာ Islam ဘာသာတည်ထောင်သူ၊ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်၊တွေးခေါ် ပညာရှင်၊ တမန်တော် ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် 40 အထိ ကုန်သည်ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာ Allah ဘုရားရှင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ထူးဆန်းဖွယ်ရာတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ကိုရမ် Qur’an ကျမ်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့အပြင် Islam ဘာသာရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Muhammad ကို မက္ကာ (Mecca)မှာ AD 570 က မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်စဉ်က အဲ့ဒီဒေသမှာ မျိူးနွယ်စုများပေါင်းများစွာဟာ မိမိနှစ်သက်ရာ ဘုရားအမျိုးမျိုးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးနေရာကတော့ ကတ်ဘာ Kaaba ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပီး အေဗရာဟမ် Abraham (အစဦးဆုံးကျမ်းရေးသူ) နဲ့ သူ့သား အစ်စ်မေးလ် Ismail တို့ က ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Mecca ကလူတွေဟာ ဘုရားအများအပြားကိုးကွယ်မှု နဲ့ ရုပ်ထုကိုးကွယ်မှု ပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့မှ Allah တစ်ဦးတည်းသာလျင် အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ရုပ်ထုကိုးကွယ်စရာ မလိုတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဘုရားဖြစ်လာတာပါ။
AD 610 မှာ Muhammad ဟာ ဂျာဘယ်လ်အန်နော Jabal al-nour တောင်ပေါ်မှာ တရားထိုင်နေတုန်း တမာန်တော် ဂေဘရီရယ် Angel Gabriel ပေါ်လာပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို လက်ဆောင်ပါးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူဟာ လူတွေကို အဲ့ဒီအသိအမြင်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မက္ကာ ကလူတွေကတော့ အစပိုင်းမှာ သူ့ကို လှောင်ပြောင် ပျက်ရယ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ Muhammad က ရုပ်ထုကိုးကွယ်မှု နဲ့ ဘုရားတွေ အများကြီး ကိုးကွယ်တာဟာ နည်းလမ်းမှန်မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းပြောတဲ့ အခါမှာတော့ မက္ကာက မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေဟာ Muhammad ကို အမြင်မကြည်တော့ပါဘူး။ သူ့ကို အဲ့ဒီ တရားတွေ မဟောဖို့တားပေမယ့် Muhammad က ဆက်လက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်မှာတော့ Muhammad နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို အမြင်မကြည်တော့ပဲ AD 622 မှာတော့ မက္ကာ ကနေ မြောက်ဘက်မိုင် 260 အကွာက မီဒီနာ Medina မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ မွတ်စလင် ပြက္ခဒိန် ရဲ့ အစ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Muhammad ဟာ Medina မှာ အသေအချာ အခြေစိုက်ပြီး မွတ်စလင် အဖွဲ့အစည်းကို တိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာကြောင့် လက်ခံယုံကြည်သူများပြားလာခဲ့ပြီး နောက်လိုက်အင်အားတောင့်တင်းလာတယ်။ AD 624 နဲ့ 628 ကြားမှာ နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့် စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ နောက်မှာတော့ Muhammad တို့အနိုင်ရပြီး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးကြတယ်။
Meccan (မက္ကာ မြို့သားများ) တို့ဘက်ကနေ စာချပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာကြောင့် AD 630 မှာ မက္ကာမြို့ကို သိမ်းယူခဲ့တယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် မက္ကာမြို့သားအများစုဟာ Islam ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ရုပ်ထုကိုးကွယ်မှု ဆန့်ကျင်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် မက္ကာ တစ်ဝိုက်က ဘုရားရုပ်ထုတွေ အကုန်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ AD 632 March လမှာ မက္ကာမြို့ ကို မွတ်စလင်တွေရဲ့ အဓိက တည်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး အယ်ရဖတ်တ် Arafat တောင်ပေါ်မှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တရားဟောခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ သူမိန်းမရှိနေတဲ့ Medina မြို့ကိုပြန်ခဲ့ပြီး AD 632 June 8 မှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို မက်စ်ဂျစ်အန်နာဘာဝီ Masjid an-Nabawi ခေါ်တဲ့ Muhammad ပထမဆုံးတည်ခဲ့တဲ့ ဝတ်ပြုကျောင်းမှာ မြုွပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ရှေးအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ တတိယမြောက် ဟိန္ဒူ Hindu ဘာသာမှာတော့ ဘုရားတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေလို သူမှာ စဦးတည်ထောင်သူမရှိပဲ အမျိုးမျိုးသော အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာတွေကနေသာ များစွာသော ပုံစံနဲ့ ဘုရားတွေရှိနေတာပါ။ BC 1500 လောက်ကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီး BC 500 နဲ့. 300 ကြားမှာဆိုရင် အတော်ကလေး ခိုင်မာနေခဲ့ပါပြီ။ ထင်ရှားတဲ့ ဘုရားတွေထဲက တစ်ချို့ကတော့
(1) Brahma (ဗရပ်ဟမာ)(ဗြဟ္မာ) The creator (ဖန်ဆင်းရှင်)လို့ ခေါ်ပြီး ကြီးမြတ်တဲ့ သုံးဦးပေါင်း အဖွဲ့မှာ ပထမဆုံး တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ စကြဝဠာ ထဲက အရာရာကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။
The preserver(ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ)ဖြစ်ပြီး Brahma ဖန်တီးတဲ့ စကြဝဠာ ကို ရှီဗာ Shiva က ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ နေသားတကျဖြစ်အောင် ပြန်လည်ပြုပြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။(3)Shiva (ရှီဝ)The destroyer (ဖျက်ဆီးသူ) အနေနဲ့ အချိန်သံသရာရဲ့ အဆုံးမှာ စကြဝဠာ ကို အသစ်အနေနဲ့ ပြန်လုပ်ဖို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ Shiva ရဲ့ အဖျက်စွမ်းအားက ပြန်လည်နုပျိုလန်းဆန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(4) Ganapati (ဂျက်န်ပတီ)The remover of obstacles (အတားဆီးများဖယ်ရှားသူ) ဟာ Shiva ရဲ့ ပထမဆုံးသား ဖြစ်ပြီး ဦးခေါင်းဟာ ဆင်ခေါင်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ကားတွေ ဘာတွေမှာ ဓာတ်ပုံ အသေးလေး တွေနဲ့ ဆောင်ထားတတ်ကြပါတယ်။
(5) Rama(ရာမ) and Krishna(ခရှစ်ရ်နား) Vishnu ရဲ့ Avatars (also descent) မျိုးဆက်တွေ အနေနဲ့ Rama ဟာဆိုရင် ဟိန္ဒူ တွေရဲ့ အချစ်တော် နတ်ဘုရားဖြစ်ပြီး Ramayana (ရာမာရာနာ)(ရာမာရန ဇာတ်တော်ထဲက သူရဲကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Rama ကို စံပြ သား၊အကို၊ယောင်္ကျား၊ဘုရင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပုံဖော်လေးစားကြပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာ လုံးနီးပါးသိတဲ့ ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရားနာမည်က Krishna ဖြစ်ပါတယ်။ သူကို ဝတ်ပြုသူတွေကတော့ သူကို ချစ်ခြင်း၊သနားဂရုဏာနဲ့ ကြင်နာယုယခြင်း နတ်ဘုရားအဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။
(6) Saraswati (ဆရပ်စ်ဝတ်တီ)(ဆာရဝတီ)Brahma (ဗြဟ္မာ) ရဲ့ ကြင်ယာတော် ဖြစ်ပြီး The goddess of learning (သင်ယူတတ်မြောက်ခြင်း နတ်ဘုရားမ) အဖြစ် ညဏ်ပညာ၊ဂီတ စတာတွေ အတွက် တောင်းဆုပြုကြပါတယ်။
(7) Lakshmi(လက်က်ရ်မီ)(လက်ချမီး)Vishnu ရဲ့ကြင်ယာတော်ဖြစ်ပြီး ကံကောင်းခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းတို့အတွက် တောင်းဆုပြုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကမ္ဘာ စတုတ္ထ မြောက် ဘာသာဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Gautama (ဂေါတမ) ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမတွေ အဘိဓမ္မာ တွေနဲ့ ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ ဒီဘာသာတရားဟာ BC 600 နဲ့ 400 ကြားမှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ အဓိက ခေါင်းစဉ်ကွဲကြီး နှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ Theravada (သီရာဗာဒါ) (ထေရဝါဒ) နဲ့ Mahayana (မဟာယန) ဖြစ်ပါတယ်။ Founder (တည်ထောင်သူ) ဖြစ်တဲ့ Gautama ဟာ BC 563 မှာ Nepal(နီပယ်လ်)(နီပေါပြည်) Lumbini (လမ်ဘီနီ) လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ထဲမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မိဘတွေက ŚUddhodana And Maya (သုဒ္ဓေါဒနမင်း နှင့် မာယာ) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင် မာယာဟာ သူ့ကိုမွေးပြီး ၇ ရက်အကြာမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Siddhartha (သိဒ္ဓတ္ထ) မင်းသားငယ်ဟာ အသက် ၁၆ မှာ Yahodhara (ယသော်ဓယာ) နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၃ နှစ်ကြာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ အသက် ၂၉ နှစ်မှာတော့ သူအို၊သူနာ၊သူသေ၊ရဟန်း အစရှိတဲ့ နိမိတ်လေးပါးကို ဆင်ခြင်မိပြီး ဇနီး၊သားနဲ့ အရာရာကို စွန့်ထားခဲ့ပြီး လောက အမှန်တရားရှာဖွေရန် တောထွက်ခဲ့တယ်။ ၆ နှစ်ကြာအောင် အာဟာရပြတ်လပ်ပြီး အပြင်းအထန် ကြိုးစားအားထုတ်ပေမဲ့လည်း သူလိုချင်တဲ့အဖြေကို မရရှိဘဲ သေလုမတတ်ဖြစ်ပြီးနောက် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်နဲ့ ပြောင်းလဲ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရင်း နောက်ဆုံးမှာ အလုံးစုံကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ အတူ Buddha (ဘုရားရှင်)အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တရားဟောခြင်း၊ Sangha (သံဃာ) ဂိုဏ်း ထူထောင်ခြင်း၊ လူအများကို ဥာဏ်အလင်းပြခြင်း စသဖြင့် သူ့ရဲ့ အသိအမြင်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီးနောက် အသက် ၈ဝ အရွယ်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လူတွေအတွက် အလင်းပြသူ၊ အဘိဓမ္မာ တရားတွေ ဖော်ထုတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Previous Previous post: ဘင်္ဂလားဒေရှ့် မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ဆင်ရေးအတွင်း လူပေါင်း ၇ဝ ကျော် သေဒဏ်ပေးခံရ
Next Next post: အထီးကျန်ခြင်းကို ဘယ်လိုတွန်းလှန်မလဲ
Published: March 7, 20182:17 am Updated: June 6, 20202:35 pm
တစ်နေ့တာမှာ ရင်ထဲက အရှိအတိုင်း သင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ရယ်ခဲ့ ပြုံးခဲ့ မိလဲ။ ဘဝအမောတွေကြား နစ်မြုပ်နေရင်း ရယ်ဖို့ ပြုံးဖို့တောင် မေ့လျော့နေတဲ့ လူတွေကို အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။ တစ်နေ့တာ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့…